Earphone ဆုကို ရယူပါ ﻿
Earphone ဆုကို ရယူပါ
Tags: job win exclusive
ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းဖုန်းဆော့ဝဲလ် (Android Application) ကို စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကွန်ပျူတာနှင့်ဖုန်းများမှတဆင့်လည်း နေ့စဉ်အလုပ်အသစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ကို လူကြီးမင်းတို့ထံ ကမ်းလှမ်းလျက်ရှိပါသည်။ သစ်လွင်ဆန်းသစ်တဲ့ဆုမဲတွေကိုရရှိဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ www.jobsinyangon.com မှာ ပါဝင်ဆင်နွဲလိုက်ပါ။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ CV များကို ဇွန်လမကုန်မှီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ www.jobsinyangon.com နှင့် www.jobless.com.mm တွင်ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းတို့ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့မည်ဆိုလျှင် Addidas earphone များကို ဆွတ်ခူးရယူနိုင်သည့်အပြင် ကျွန်တော်တို့ www.jobsinyangon.com ဆိုဒ်ပေါ်မှ အလုပ်ရှာဖွေခြင်း၊ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြံပေးခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ BLOG များနှင့် ဆောင်းပါးများ၊ ဟာသများ၊ Company Profiles များနှင့် အခြားသောကဏ္ဍများကို ကြည့်ရှုလေ့လာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များရရှိဖို့ တောင်းဆုပြုပါတယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ Jobless.com.mm အဖွဲ့။
To celebrate that event, we offer to youaprize to win! It is designed for people with an active lifestyle in mind and for people like you.
How to participate? Very very easy:-)
Just post your CV/Resume at www.jobless.com.mm or www.jobsinyangon.com until end of June. If you do that you can not only win this wonderful Addidas earphones, but you can participate in all events which will follow and use all the features at our site (finding job, job advices, interesting BLOG and articles, jokes, company profiles and many others). Tell your friends to participate as well.
We wish you all the best and good luck in findingabetter JOB.